Ny asidra amin'ny ranomasimbe (OA) dia iray amin'ireo loza mitatao maharitra maharitra indrindra amin'ny ekôsistemin'ny haran-dranomasina ary hitohy amin'ity taonjato ity, na inona na inona fandrosoana amin'ny fampihenana ny etona noho ny habetsahan'ny gazy karbonika efa ao amin'ny atmosfera.
Mampihena ny fisian'ny ion karibonetra ilain'ny zavamananaina maro, toy ny vato harana sy moluska, ny fananganana taolam-paty sy akorandriaka, ny fanasidian'ny ranomasina. Ho an'ny haran-dranomasina, ny fiantraikan'ny asidra amin'ny ranomasimbe dia ny fiantraikany amin'ny fitomboan'ny haran-dranomasina, ny ahidrano haran-dranomasina, ary ny tahan'ny fikorontanan'ny simika amin'ny haran-dranomasina izay misy fiantraikany lehibe amin'ny vondrom-piarahamonina trondro miankina.
CO2 miboiboika avy amin'ny fanambanin'ny ranomasina amin'ny CO2 seep. Ny vondrom-piarahamonina miaina ara-boajanahary ao anatin'ny toe-piainana misy asidra dia manome fomba fijery miavaka momba ny mety ho endriky ny haran-dranomasina amin'ny hoavy. Sary © Sam Noonan/Institut Aostraliana momba ny siansa an-dranomasina
Amin'izao fotoana izao, ny tari-dalana tsara indrindra amin'ny fitantanana ny asidra amin'ny ranomasina dia ny fametrahana laharam-pahamehana amin'ny fitantanana ny fiarovana ny fialofana voajanahary sy ny fitantanana ireo adin-tsaina eo an-toerana amin'ny vatohara. Ny paikadin'ny fitantanana izay miaro ireo fialofana voajanahary ireo amin'ny adin-tsaina hafa dia mety hanampy ny haran-dranomasina hiatrika ny fiovan'ny toetr'andro sy ny simia an-dranomasina.
Ny paikady fitantanana hampihenana ny fiantraikan'ny asidra amin'ny ranomasina dia ahitana:
Design MPAs izay mihevitra ny OA
Ampihenana ny fandrahonana izay mampitombo ny toetry ny asidra amin'ny ranomasina
Tadiavo sy ampiharo fitsabahana vaovao
Ahena ny vokatry ny OA
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA PMEL Carbon Program
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Tetikasa Global Carbon
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiomanana amin'ny fitantanana ny haran-dranomasina ho an'ny fanamafisana ny ranomasina: lesona avy amin'ny Coral Bleachingmanokatra fisie PDF